Maitiro ekuwana vateveri vazhinji pa Instagram Cheat Sheet
Maitiro ekuwana vateveri vazhinji pa Instagram Cheat Sheet : #Nhungamiro n ° 1
Instagram yanga iri imwe yeakanyanya kuronga uye mushandisi-ane hushamwari chiteshi chekushambadzira nekusimudzira mabhizinesi, mhando uye zvigadzirwa. Car, kusiyana nemamwe masocial media, Instagram haidi kuti iwe ubhadhare ads kana vateveri kuti uwedzere kuita kwako.
Zvisinei, kushambadza uye kuwana vateveri kuitira kuti uwane yakasarudzika yekubata mwero pa Instagram kwakaoma uye kunonetsa, asi inogona kuitwa nyore nerubatsiro rwepepa rekubiridzira.
A cheat sheet? Zvinonzwika zvinonakidza, kwete? Ipapo, unoziva here Instagram kubiridzira machira? Hongu kwete, zvino tichakutsanangurira zvose munyaya ino. Instagram's cheat sheet irondedzero yema hacks, maturusi uye mirairo iwe yaunofanirwa kutevera kuti uwane vamwe vateveri.
Kunze kwezvo, cheat sheet rinokubatsira kuwedzera kubatana kwako nekuwana zvishandiso zvinodiwa kuita mabasa anodiwa. Saka iwe unoda kuziva maitiro ekuwana vateveri vazhinji pa Instagram cheat? tsime, izvi ndizvo zvatichabata pano, saka ramba wakashama.
Maitiro ekuwana vateveri vazhinji pa Instagram Cheat
Vanhu, makambani kana zvigadzirwa zvinoshandisa nzira zhinji uye nzira dzekuwedzera avo vateveri ve Instagram, uko vamwe vavo vanowana vangangosvika zviuru gumi nembiri zvevateveri ve Instagram nemadhora 0 mumazuva mashoma. Iyi Instagram cheat sheet yakafanana; iyo zvakare nzira yekuwedzera vateveri vako.
Zvisinei, vanhu vashoma chete vari mumunda wekushambadzira vanoziva iyi Instagram cheat sheet. Saka, kana iwe uri mumwe weavo vashoma vanhu vasingazive iyi Instagram cheat sheet, asi iwe unoda kuvandudza yako Instagram chikuva uye kuwana vateveri vazhinji, tsime, gara uongorore chinyorwa ichi.
Ichi chinyorwa ndicho chega # 1 gwara rekuti ungawana sei vakawanda kubiridzira Instagram vateveri..
Maitiro Ekuwana Vazhinji Vateveri pa Instagram
Saka, nekuenda kune iyo rondedzero maitiro ekuwana vateveri vazhinji pa Instagram cheat, usakanganwa kubata vateveri vako varipo mushure mekuwana vateveri vakati wandei.
Yezvino Kunyoresa Strategy
Vanhu vazhinji vanofunga kuti “kubhadhara-ku- kunyoresa ” Instagram haina basa ; saka iwe unofanirwa kuedza ichangoburwa kunyorera zano. Apa ndipo paunowana chero munhu ane nhamba yakakura yevateveri uye kwauchazotevera iwo maakaundi., kunyanya nhoroondo dzakakurumbira.
Imwe matipi ekupedzisira kunyoreswa zano kunyorera kumaakaundi kubva kune yekudonha-pasi menyu. Iwe unogona kuona aya maakaundi mushure mekutevera anofurira kana mumiriri pa Instagram, saka zvakanyanya, nyoresa kumaakaunti akasimbiswa.
Kunze kwezvo, kana iwe ukashandisa nzira iyi kakawanda, iwe uchaona vanyoreri vako vachiwedzera parutivi rwako. Zvisinei, chenjera kuti usanyore kune vanhu vakawandisa pa Instagram, nekuti chiitiko ichi chinogona kukonzera kurambidzwa kweakaunti yako. Naizvozvi, kuti ndikubatsire, isu tinokurudzira kutevera makumi matatu chete maakaundi paawa, nekuti izvi zvinokutendera kuti ugare uchibudirira uchidzivirira kurambidzwa.
Shandisa Instagram hashtag
Kushandisa hashtag pa Instagram ndechimwe chezvinhu zvakakosha kana hacks zvinogona kukubatsira iwe kuwedzera vateveri vako., uye kana zvasvika kune Instagram hashtag, yeuka kuti makwikwi anokosha.
Kunze kwezvo, kubira uku hakusi nyore kune maakaundi ane vashoma vateveri, saka edza kutanga wabira yekutanga, uye kana zvikafamba zvakanaka, unogona kubva waenderera pane iyi sarudzo. Nhamba yakakurudzirwa yevateveri vasati vashandisa hashtag iri pakati pe5,000 negumi,000..
Imwe huru Instagram hack yekuwana vateveri vazhinji yakavakirwa pazita rako re Instagram kana zita rekushandisa. Izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vadzoke kuprofile yako mushure mekusakutevera kana vangoona yako Instagram peji.. Nguva zhinji, chikuva uye hunyanzvi hwega hazvaizokubatsira kuunganidza vateveri, nekuti dzimwe nguva zvinoenderana nezita rako rekushandisa.
Kuve neanoshanda username pa Instagram kukwezva vateveri, zita rako rekushandisa harifanirwe kuve naro:
● Nhamba dzacho
Ngatifambei kune inotevera yakakosha Instagram muteveri yekubira trick.!
Yenguva Yakareba Instagram Vateveri Kukura Techniques
Aya mazano ekuvandudza vateereri vako haana kukwana mavari ; iwe unodawo zano rerefu-rekuchengetedza vako vanyore. Naizvozvi, mune hack iyi, isu takapa nzira dzekuwana uye kuchengetedza vateveri vako kwenguva refu.
● Taura vateereri vako vakakodzera.
● Shandisa zvinyorwa zvirefu.
● Shandisa emojis.
● Tumira mamwe mavhidhiyo.
● Shandisa hashtag zvinobudirira.
● Ramba uchigovera Nhau Instagram.
● Bata nevateveri vako.